Virus ကိုက်နေလို ့ပါဗျို ့.....ကယ်ကြပါဗျာ... — MYSTERY ZILLION
Virus ကိုက်နေလို ့ပါဗျို ့.....ကယ်ကြပါဗျာ...
This Computer is being attacked! ဆိုပြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်ဗျ..:39:
ပေါ်လာတဲ့ style ကလည်းလန်းတယ်ဗျ..:106:
Slide show လေးနဲ ့ကိုလာတာ..
Mz ကကိုကိုမမ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် တို ့ကို
waiyan wrote: »
ကိုေ၀ယံရေ Start/AllProgram/Startup မှာဘာရှိတာတွေ့လဲ တွေ့ရင် delete သာလုပ်ပစ်လိုက် :D သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသာ နောက်ထားတယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် ။ နောက်ပြီး Antivirus ဘာသုံးလဲမသိဘူး ။ Virus update ဖြစ်ရင်တော့ သတ်လို့ရလောက်မှာပါ။ ပြီးတော့ Spy Emergency လေးလည်းမဆိုးဘူးဗျ သုံးကြည့်ပါလား ။ MZ ထဲမှာအကုန်ရှိတယ် ရှာကြည့် ။ အနော်တော့ ကော်မကောင်းလို့ ရှာမပေးနိုင်တော့ဘူး တွေ့ပရှစ် :67::67:
တစ်ယောက်ယောက်တော့နောက်သွားပြီထင်တယ် ။ ကို johnko ပြောသလိုသာ All program>
start up ရှာပြီး delete လုပ်လိုက်တော့ဗျို့...
Hey friends try this one
download the "cureit.exe" at the bottom of the page but need to run in safe mode.